Dagaalo xoogan ayaa ka socda Gudaha Degaanka Tigray. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dagaalo xoogan ayaa ka socda Gudaha Degaanka Tigray.
Siday milatariga Ethiopia shegeen waxaa laso qabtay hogaamin badano kamida TPLF’ inkastoyna wali dadkay soo qabten warbaahinta ayna horkeenin’.
ilo muhiima ayaa no sheegay inuu shalay dagaalo culus ka dhaceen inta udhaxaysa adigrat, ilaa shire’ gaar ahaan wuxuu dagaal culus oo khasaare baaxad leh dhaliyay ka dhacay shire, iyo inta aksum, udhaxaysa’ dhimasho dhawac iyo burbur gaadid intuba aad ayay ubadan yahiin’ sida warku nagu soo gaadhayo.
milatariga Ethiopia ayaa sheegay inay ku dabo jogaan dhawr xubnod oo ka hadhay hogaamintii TPLF kuwaaso ku dhumaalay sanaayo buuraha’waa siday hadalka u dhigeene.
Xog hoose on helay ayaa sheegaysa inuu abiy ahmed Go aan saday inuu is casilo’ inkastoyna xogtaas cadayn’ wixii kaso kordha waan arkaynaa.
xaalada Ethiopia iyo sudaan ayaa cirka isku sii shareertay kadib markay Ethiopia sheegtay inay bilaabayso dhamaya tirka biyo xidheenka wabiga niil iyadon wali heshiis laga gaadhin sudaana Taas ayay aad uga cadhootay iyado sheegtay inay hanjabaad cad tahay taaso loo diray masar iyo sudaan.
Dagaalada Ethiopia iyo TPLF udhaxeeya ayaa soo xoogaystay dhawrkii maalin ee udanbaysay iyado xaaladu sii xumaanayso’ wadoyinkaas degaanka Tigray ayaa meelo badan xidhan sida la sheegayo ciidamada TPLF ayaa wadoyinka isku aruur saday si ay u go doomiyaan milatariga ama u hagar dameyaan’ isku socodka ciidamada dawlada dhexe.
Ogaadenia Media share follow
Previous articleXiisado colaadeed oo u dhexeeya Puntland iyo Somaliland oo ka dhacdey gobalka sanaag
Next articleMaxaa ka dhacay Shabeelaha Hoose?
Wasiir Faratoon Oo Ka Hadlay Xafiis Diblamaasiyadeed Oo KENYA Ka Furanayso...